Amakhasi amahle kakhulu wokubuka i-DTT online futhi aphile kuthelevishini | Izindaba zamagajethi
Ufuna bukela i-DTT online? Kwesinye isikhathi asinayo ithelevishini eduze kokubuka i-TV, kepha sinayo ikhompyutha enoxhumano lwe-inthanethi Kukhona nokuthi kungenzeka ukuthi sifune ukubona, isibonelo, isiteshi sesifunda esingatholakali endaweni yethu, ngakho-ke indlela enhle yokuyibona ngokuvakashela amakhasi ahlinzeka ngethelevishini eku-inthanethi. Kunoma iyiphi injini yokusesha singathola amakhasi amaningi athembisa ithelevishini yamahhala eku-inthanethi, kepha eziningi zazo azinikezi lokho ezikuthembisayo. Kungakho sinqume ukudala le ndatshana ukukunikeza lokho esikuthathe njenge amakhasi amahle kakhulu wokubuka ithelevishini online.
Njengenjwayelo, lolu hlu olulandelayo aluhambisani nekhwalithi noma ukubaluleka, kepha sibangezile njengoba besibavakashele. Amakhasi alandelayo abesebenza ngesikhathi sokubhala lokhu okuthunyelwe, kodwa ezinye iziteshi kungenzeka zingasebenzi ngesinye isikhathi. Into ejwayelekile ukuthi bawafaka lapho bebona ukuthi bawile, kepha akudingekile ukuthi bacabange ukuthi bazosebenza njalo. Kungenzeka nokuthi elinye lamakhasi alandelayo liye ku- bukela i-tv online mahhala ngesiSpanish ukuvala ngokuzayo. Sikushiya nohlu.
1 Amawebhusayithi wokubuka i-DTT online
1.1 I-Tele Online yami
1.2 Bheka i-TTfree
1.3 I-TV ngqo
1.6 I-tv yamahhala
2 Izinzuzo nokuqeda
2.1 Izinzuzo zokubuka i-DTT online
2.2 Nebubi ukubukela DTT inthanethi
Amawebhusayithi wokubuka i-DTT online
Uma konke okufunayo kungukuthi bukela iziteshi ze-DTT online, okuhle kakhulu amakhasi amathathu alandelayo. Okukulezi makhasi ukukhetha kwe- izixhumanisi zamakhasi asemthethweni yesiteshi ngasinye, ngakho-ke ayikho indlela engcono yokubuka lezi ziteshi ku-inthanethi. Akuwona amakhasi aneziteshi ezahlukahlukene kakhulu, kepha kufanelekile ukuwagcina ekamelweni, uma kungenzeka.
Kunoma ikuphi, ngezansi uneqoqo le- amawebhusayithi wokubuka i-DTT online lapho ngaphezu kweziteshi zakudala zethelevishini yasemhlabeni, ungathola isiteshi esikhokhelwayo noma esisakazwa kwamanye amazwe.
I-Tele Online yami
Emakhasini onawo ngezansi kuneziteshi zazo zonke izinhlobo ezitholakalayo. Phakathi kwalezi ziteshi kuzoba neziteshi zabantu abadala, ezemidlalo nezindikimba zazo zonke izinhlobo zokuqukethwe, imvamisa, okuzoba yiziteshi ezikhokhelwayo. Ukusetshenziswa kwalezi ziteshi kungumsebenzi womsebenzisi ngamunye. I-Actualidad Gadget inikeza kuphela izixhumanisi zamakhasi, wona, anikezela iziteshi ngokwazo.
Ku-VERDIRECTOTV sineziteshi ezahlukahlukene. Siyabona iziteshi ze-DTT, ama-movie, amadokhumentari, imidwebo, yesifunda ... Futhi azikho nje kuphela iziteshi zaseSpain, kusukela kukhona namazwe omhlaba. Lokhu sizokubona, ngaphezu kwakho konke, esigabeni sezemidlalo, lapho kuneziteshi zokubuka imicimbi yezemidlalo emahhala kwamanye amazwe. Kuyafaneleka ukuthi ilondolozwe kuzintandokazi, ngaphandle kokungabaza.
KuVerLaTeleGratis sizophinda futhi sibe nohlu olukhulu lweziteshi, ezinkulu kunezedlule. Izingxenye zingakwesokudla, ngezansi kancane, futhi ohlwini lwezigaba siyabona ukuthi kukhona neziteshi ezivela emazweni ahlukene (kubakaki inani leziteshi). Ukuba nohlu olukhulu kangako, maningi amathuba okuthi ezinye iziteshi zingatholakali, kepha zivamise ukuzigcwalisa ngokushesha lapho zithola ukuthi isiteshi sehlile.
Ku-TVgratis sinesinye isixha seziteshi esisatshalaliswe phezu kweqembu lezigaba (ungazibona esithombeni). Kukhona isayensi, ezemidlalo, ezokuzijabulisa nakho konke esingakucabanga. Kukhona neziteshi ezivela emazweni amaningi kanti ezinye zikhona iziteshi zeqembu lebhola lezinyawo, Ngokwesibonelo. Ngokusobala, ukuba nohlu olukhulu kangaka, kungenzeka ukuthi kukhona nezixhumanisi eziphansi, kepha kuyinani okufanele ulikhokhe ukubuka ithelevishini online.
KuTeleFiveGB sizothola uhlu olukhulu kakhulu engilutholile, oluvela emazweni ahlukene, izixhumanisi eziningi zesiteshi esifanayo nangazo zonke izinhlobo. Kubukeka sengathi izintandokazi zakhe yiziteshi zezemidlalo, kepha kuTeleFiveGB sizothola konke, njengeCanal + noma iziteshi zesifunda. Unganqikazi ukuyigcina kuzintandokazi zakho ukuze uyibheke lapho ufuna ukubona noma yiluphi uhlobo lomcimbi.
Ku-TDTvision, yize sikwazi ukuyifunda ngokucacile i-DTT, azikho iziteshi ze-DTT kuphela. Sinezinye iziteshi ezitholakalayo njenge- Canal + (eziningana zazo), Syfy, Gol TV noma isiteshi se-NASA. Ngaphezu kwalokho, inazo zonke iziteshi zesifunda ezitholakalayo nezizotholakala, kanye nesixhumanisi esinesifiso sokuthola ama-movie ku-YouTube (okuwukusesha kuphela ngombhalo othi "movie egcwele" kungxenyekazi yevidiyo). Akubandakanyi ukukhangisa okweqile, okwaziswa kuwebhusayithi yalolu hlobo.
Manje ngikuthola kumnandi ukuphawula ngobuhle nobubi be bukela i-internet tv:
Izinzuzo zokubuka i-DTT online
Singabuka i-tv ngaphandle kwesokhethi le-DTT. Lokhu kuza kahle kakhulu emakamelweni ethu lapho, ngokujwayelekile, singenayo i-TV noma lapho singaxhuma khona.
Iziteshi zazo zonke izinhlobo, kufaka phakathi okuqukethwe kwezemidlalo nokwabantu abadala. Uma ufuna, lapha ungabona okuhle kakhulu amawebhusayithi wokubuka ibhola online.
Mahhala. Kulolu hlu, yonke into imahhala, kufaka phakathi iziteshi ezivela endaweni yangaphambilini. Uma, nganoma yisiphi isizathu, ucelwa ukuthi ufake inombolo yocingo noma olunye uhlobo lwedatha yomuntu siqu, kuyingxenye yokukhangisa okusekhasini, okuphikisana nalezo engizibhala ngezansi
Nebubi ukubukela DTT inthanethi
Khangisa kuze kube yisicefe. Kuningi ukwaziswa ongakusho ngaphandle kokwesaba ukuthi kungaba yinto enyanyekayo. Kokunye, kufanele uvale izikhathi ezivelelayo ngenkathi sibona noma yini. Asangezanga ikhasi lekhwalithi kulolu hlu ngoba sivula inqwaba yamawindi e-pop-up okumele avalwe ngesandla ngamunye ngamunye.
Ikhwalithi ephakathi isithombe nomsindo. Lokhu akumele kusimangaze, kepha ukubukela i-TV ebukhoma (mbumbulu) isithombe asivamile ukudlula ikhwalithi ye-SD.
Kungase kube nokusikeka. Ngokuya ngewebhu, kungenzeka ukuthi sizobona ukuthi ividiyo, isithombe noma zombili zinqunywa kanjani futhi zingaphuma esikhathini ngezikhathi ezithile.
Njalo noma cishe njalo kuzodingeka Flash Player.
Kumele ube nayo ukuxhumana okuhle. Uma ufuna ukubuka ithelevishini online, kuzofanela ube nokuxhumana okuhle. Ngingasho ukuthi, okungenani, kungathatha i-6mb ukuyibona ngaphandle kokusikeka, inqobo nje uma umsakazi wesiteshi engenazo izinkinga. Uma sikubona ngejubane elincane, kungenzeka ukuthi sihlangabezane nokusikeka futhi isizathu asikho okunye ngoba kufanele sigcwalise isilondolozi ngaphambi kokudlala okuqukethwe.
Uyawazi amakhasi amaningi we- bukela i-DTT online? Sitshele amawebhusayithi owasebenzisayo ukubuka i-TV yamahhala online ngeSpanishi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ukuphanga » Bheka i-TDT online
bukela i-tv online movistar kusho
Akunasheke lesikweletu. I-TV ehamba nawe.
Phendula ukubuka i-tv online movistar
Inketho engcono kakhulu yokubuka i-TV ebukhoma mahhala yilezi: vertvgratis.info
Manje kungenzeka ukugenca ikhompyutha usebenzisa ama-molecule e-DNA
I-Intel Core X: yonke imininingwane yomndeni omusha we-Intel processor